Somali » Shakhsiga » Caawinaad » FAQs
Ma samaysan karaa adeegga E-voucher?
Ma ii qeexi kartaa Adeegga dalmar?
Sideen u diiwaan gelin karaa numberkayga?
Sideen u hagaajin karaa fariimahayga si aan u isticmaalo Fariin qoraalka Hormuud?
Intee ayuu la’egyahay cumriga kaarka la xogto ee Hormuud $1, $2, $5, iyo $10?
Goorma ayaa la igu soo dalacayaa biilka telka postpaid-ka ah?
Sidee lacag iigu jirta aan ugu xawili karaa number kale oo Hormuud ah?
xogtayda shaqsiga ah ilaa heer intee ah ayay xafidantahay?
GSM-KA Hormuud shabakadaha dalka ka jira kuwee ayay shabakad wadaag yihiin (National roaming)?
Wax lacag ah oo igu soconaysa miyaa jira inta aan haysto simcard-ka Hormuud?
Wax qarash ah miyaa la iga rabaa si aan u diiwaan geliyo number-kayga?
Ma jiraa Qiimo dhimis iyo dhiiri gelin loogu talagalay macaamiisha Hormuud ee isticmaasha Adeegga Landline-ka?
Hormuud ma leedahay number dibadda lagala soo xiriiri karo oo macaamiisha caawiya?
Mobile-kaygu wuxuu soo saarayaa Geli furaha PUK marka aan damco in aan nuber Waco sideen u xalin karaa mushkiladaas?
Mobile-kaygu wuxuu iisoo bandhigayaa “number-kaadu diiwaanka wuu ka baxay” ee maxaan sameeyaa?
Marka aan ebyo isdiiwaan gelinta maxaa kale ee ii furan?
Diiwaan gelinta kadib macmiilku wuxuu codsan karaa:
Adeegyada la xiriira caawinta ee ay ka mid yihiin number sireedyada xadididda wicitaanka gudaha ama dibadda, wareejinta haraaga, ogaanshaha qaanta marka aad tahay macmiil isticmaala adeegga QAANTA (Postpaid).
Maxaa la iiga baahan yahay si aan u noqdo macmiil isticmaala laf ah Adeegga Qadim-ka (Prepaid) ee Hormuud Telecom?
Si aad u isticmaasho adeegga Qadim-ka ee Hormuud waxaa kaliya ee lagaa rabo waa inaad iibsato Laf noocaas ah goob kasta oo Hormuud leedahay.
Si aan u isticmaalo mareegta Hormuud dheegsi (Browser) nooce ah ayaan u baahanay?
Mareegta Hormuud waa mid casri ah waxayna ku shaqayn kartaa kuuguna furmaysaa dheegsi (Browser) kasta oo aad isticmaasho.
Waa maxay namber-ka fariimaha ee Hormuud?
namber-ka fariimaha ee Hormuud waa (+252103)
Haddii lacag iga qaldanto halkee la xiriiraa?
Isla marka aad ogaato in lacagi kaa qaldantay fadlan la xiriir qaybta adeegga macamiisha ee 101/141 ayaga ayaa kuu adeeggaya.
Marka aan dalka ka baxo maxaa adeeeg ah oo aan ka heli karaa GSM-ka Hormuud?
Waxaa kuu shaqaynaya adeegyada Hormuud sida wicitaan iyo fariimba lacada nooc ee GSM-ka Qadim/Prepaid iyo Qaan/Postpaid, sidoo kale waxaa kuu shaqaynaya adeegga EVC pluss meel walba oo aad ka tagto aduunka.
Qiimaha kirada landline-ka waa meeqo bishii?
Qiimaha kirada bishii ee landline-ka waa $5, haddii aad ku isticmaasho internet ama aad ku isticmaasho kaar-ka xoqashada kirada waa lagaa dhaafayaa.
Markasta oo aan damiyo Mobile-kayga waxaa iisoo baxaya geli number sireed (pin code) maxaa yeelaa?
Si aad u tirto number sired-kaas tag Settings->Security settings -> PIN code request -> Enter 4 digit PIN 1 code ->Off
Marka aan damco inaan sameeyo wicitaan waxaa iisoo baxaya fariin “wicitaan lama ogollaan”
Si aad u xaliso cilladaas fadlan raac habkan:
dooro “Security settings”
kadib dooro “Fixed dialling”
kadib dooro “Off”
geli PIN2 code